Wasiirka ugu safaradda badnaa xukuumadda Soomaaliya oo noqday wasiirka amniga – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Wasiirka ugu safaradda badnaa xukuumadda Soomaaliya oo noqday wasiirka amniga
Wasiirka amniga gudaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow (Ducaale) ayaa noqday wasiirkii ugu safarada badnaa ee inta badan ka maqan magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalka Soomaaliya.
Wasiir Islow oo saaxiibo dhaw la ah ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa ka mid ahaa xubnihii madaxweyne Farmaajo ku wehlinayay dhammaan safaradii uu dalka dibadiisa ugu baxay, isagoona sidoo kale hore u raacay ra’iisul wasaaraha oo safarkiisa ugu horeeyay dhawaan ku tagay dalka Qadar.
Xog uruurin oo ay sameeysay warbaahinta Bulshoweyn ayaa sheegeysa in dhammaan safaradaasi ee wasiirka amniga ay sababeen habacsanaan dhinaca amniga ah, gaar ahaan kan magaalada Muqdisho.
Safaradda wasiirka ayaa sidoo kale keenay in dib u dhac baahsan uu ku yimaado isbadelo hore loo doonayay in lagu sameeyo wasaaradda amniga, maadaama amniga magaalada Muqdisho uu noqday mid faraha kasii baxaya.
Mar wasiirka wax laga weydiiyay safarada badan ee uu dibadda ugu baxay xilli amniga dalka, gaar ahaan kan magaalada Muqdisho uu sii xumaanayo ayaa ku macneeyay inay ahaayeen kuwa loogu baahday wehlinta madaxweynaha Soomaaliya.
Wasiirka amniga gudaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow (Ducaale) ayaa saaxiib dhaw la ah ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre, waxaana sida la ogsoon yahay uu ra’iisul wasaaraha marnaba jecleysan maqnaanshihiisa badan ee dibadda, inkastoo maalmihii ugu horeeyay uu wasiir Islow muujiyay dardar aad u xoogan oo dhinaca shaqada ah.